खबरदार ! काठमाडाैंमा बिनाकाम घर बाहिर ननिस्कनुहाेला – पानी पधेरो
खबरदार ! काठमाडाैंमा बिनाकाम घर बाहिर ननिस्कनुहाेला
काठमाडौं — तपाईं आज बिना काम घर बाहिर निस्कदै हुनुन्छ भने होसियार ! काठमाडौँ उपत्यकाको वायु अहिलेसम्मै प्रदुषित भएको पाइएको छ । मङ्गलबार अर्थात् आजको वायु अहिलसम्मकै दुषित भएको वन तथा बातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । वायु प्रदुषणको तह उच्च विन्दुमा पुगेपछि अमेरिकी राजदूतावासले पनि घरभित्र बस्दा झ्याल ढोका बन्दा गरेर, मास्क लगाएर बस्न सुझाव दिएको छ । प्रदूषित वातावरणमा सावधानी अपनाएर हिँड्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
वायुप्रदुषणले कोभिडका बिरामीको स्वास्थ्य बढी प्रभाव पार्छ
वायुप्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नै पर्छ । तर, कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ संक्रमित बिरामीलाई वायुप्रदूषणले झनै नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । वायुप्रदूषणले विश्वमा कोभिड संक्रमितको मृत्युदर ३ प्रतिशतले बढाउने सहयोग गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । वायुप्रदूषणले सिधै श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा असर गर्ने भएकाले स्वास्थ्य गम्भीर समस्या निम्ताउन सक्ने शुक्रराज तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । ‘वायुप्रदूषणले डबल हिट गर्छ, अर्थात् कोरोनाभाइरस हुँदा पनि फोक्सोमा संक्रमण गर्छ भने श्वासप्रश्वास प्रक्रिया पनि त्यहीबाट हुने भएकाले स्वास्थ्य समस्या झन् बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।
यसअघि पनि संक्रमितहरुलाई वायुप्रदूषणले बढी नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले दूषित वातावरणबाट जोगिन चेतावनी पहिला नै वैज्ञानिकहरुले दिइसकेको उनले बताए । वायुप्रदूषणले कोभिड संक्रमित बिरामीलाई थप क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले उपत्यकाको वातावरण प्रदुषणमय हुँदा चिन्ताको विषय बनेको उनले सुनाए । छातीसम्बन्धी रोगीलाई मात्रै नभए अन्य दीर्घरोगी, मुटु, मिगौला रोगीको स्वास्थ्य झन समस्या सृजना हुने उनले बताए ।
उपत्यको बातावरण धुँवामय भएका बेला सकेसम्म विनाकाम घरबाहिर ननिस्कन उनले आग्रह गरे । जाडो भयो भन्दैमा वातावरण दूषित भएको बेलामा आगो बालेर नताप्न समेत बातावरण विभागका उप—महानिर्देशक जोशीले जोड दिए । उपत्यका भित्र वायुप्रदूषण भएका बोलामा दीर्घरोगी, दमको समस्या भएका, कोभिड संक्रमण भएले सकेसम्म आगो नताप्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषित वातावरणमा यात्रा गर्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोग, चस्माको प्रयोग गर्न समेत उप महानिर्देशक जोशीको आग्रह छ । यस समयमा घरभित्र बस्दा बस्दा भ्mयाल ढोका लगाएर वा मस्कको प्रयोग गर्दा पनि राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण प्रदूषित हुन नदिनका लागि वातावरण विभागले जनचेतनामूलक कार्यक्रम टोलटोलमा गर्ने उनले सुनाए । उपत्यकामा प्रदूषित धुवा सवारीबाट निस्कने भएकाले सवारी यातयातहरुलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने उनले बताए । उपत्यकाको प्रदूषणमय वातावरण विहीबारसम्म विस्तारै घट्दै जाने उप—महानिर्देशक जोशीले बताए ।
विदेशीले भन्दा पनि नेपाली ब्वाँसाले देश सिध्याए : रमेश खरेल